> Resource> Utility> otú ndozi Crypt32.dll Error
Crypt32.dll bụ a modul nke nwere ọrụ ji site Windows kaadị API. The na-egosi nke nsogbu na gị crypt32.dll faịlụ abịa n'ụdị nke njehie ozi ma ọ bụ yiri ndị ahụ e depụtara n'okpuru ebe a:
1. "The faịlụ crypt32.dll na-efu."
2. "Crypt32.dll bụghị Hụrụ"
3. "Ike ịhụ [PATHTO] crypt32.dll"
4. "Nke a ngwa okpu-amalite n'ihi crypt32.dll ahughi. Re-wụnye ngwa nwere ike idozi nsogbu a."
5. "Ike na-amalite [omume]. A chọrọ akụrụngwa na-efu: crypt32.dll. Biko wụnye [omume] ọzọ."
Crypt32.dll njehie a na-eme mgbe ị na-eji ma ọ bụ wụnye a-atọ ndị ọzọ omume, Windows amalite ma ọ bụ mechie, ma ọ bụ ma eleghị anya, ọbụna n'oge a Windows nwụnye. Na njehie nwere ike mere site ihichapụ ma ọ bụ nrụrụ aka nke crypt32.dll faịlụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, crypt32.dll njehie pụrụ igosi a ndekọ nsogbu, a virus ma ọ bụ malware agha ma ọ bụ ọbụna a ngwaike ọdịda.
Otú ndozi Crypt32.dll njehie?
Nọmalị ndị nwere ike ibudata crypt32.dll si a "wdg download" website dochie nke ochie ahụ, ma ọ bụghị a ezi echiche, na i nwere ike inweta ya site na ya mbụ, ziri ezi isi iyi. Kasị nke oge, nnọchi nke crypt32.dll faịlụ adịghị idozi nsogbu ahụ. Chọpụta njehie apụ ma na-achọta ụzọ dị irè na-akwụsị crypt32.dll njehie ya.
1. Ọ bụrụ na gị PC na-arụ ọrụ nke ọma tupu i ehichapụ crypt32.dll n'amaghị ama, dị nnọọ weghachi crypt32.dll faịlụ site egweri biini. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ebe ahụ, i nwere ike e sụrụ egweri biini mgbe, mgbe ahụ, ị pụrụ iji a faịlụ mgbake omume na-crypt32.dll azụ.
2. Ọ bụrụ na a yiri ozi dị ka "The faịlụ crypt32.dll na-efu" na-egosi elu, dị nnọọ reinstall omume na e dere ihe crypt32.dll faịlụ.
3. Mgbe ụfọdụ, wụnye ọkwọ ụgbọala ga-eme ka crypt32.dll efu ma ọ bụ mebiri emebi. Dị otú ahụ ikpe, na-agbalị imelite na nso nso arụnyere ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ ndị na-metụtara crypt32.dll faịlụ.
4. Odokwara Windows Registry bụ ike. Chọta a ndekọ Cleaner ịrụzi ndekọ njehie, nke nwere ike wepụ ghara ịdị irè crypt32.dll ndekọ Ndenye na-eme ka ndị crypt32.dll njehie.
Olee otú Mepụta Bootable LiveBoot CD